October 2018 - Sawirrotv
Warbixin sanadeedka oo aan wali la daabicin ayaa waxaa ay u sheegeysaa golaha Amaanka ee QM in Dhulka iyo Nidaamka Al-shabaab ay Canshuurta kasameeyaan ay ka weeynyihiin midka Dowladda Faderaalka ah ay Canshuurta ka sameeeyso ama ka qaado. Jawaanadda Dhuxusha ah waxaa lagu qaadaa doomo yar-yar oo watta calanka Iran waxana loo dhoofiyaa Dekedda Al-Xamariya …
Dalka Imaaraadka oo Lagu Eedeeyay Inuu Ku Xad Gudbo Dalka Soomaaliya (VIDEO)
Hay’adda Qaramada midoobay ee dhanka Dambiyadda ayaa sheegtay in ganacsato xarun ku leh dalka Imaaraadka ay Iran u isticmaalayaa Bar ay u marto Dhuxusha Soomaaliya ee sida sharcidarada ah loo dhoofiyo taas oo Al-shabaab ay Malaayiin doolar ka sameeyaan canshuur ahaan. Warbixin sanadeedka oo aan wali la daabicin ayaa waxaa ay u sheegeysaa golaha Amaanka …
Kulan kan oo ka dhacay qasriga boqortooyada dalka Sucuudiga ayaa Ra’iisul wasaaraha iyo Boqor Salmaan ayaa waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labo geesoodka ah ee Soomaaliya iyo Sucuudiga, iskaashiga dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo siyaasaddaa. Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale kulamo kala duwan la qaadanaya madaxda Bangiga horumarinta Islaamka oo ay …
Askari Shacabka Taleefanada ka Aruursanayay oo Gacanta Lagu soo Dhigay (SAWIRRO)
Askari boolis ah oo lagu magacaabo Maxamed Cabdikariin Cabdullaahi ayaa laga soo qabtay agagaarka jaamacadaha ee degmada Hodan, xilli uu dhac u geysanayay shacab ka soo baxay salaadda subax iyo kuwa u sii socday Masjidyada ku yaallo xaafadaha degmada Hodan. Shacabka degmada ayaa ku war geliyay guddoomiye waaxeedka xaafadda iyo taliyaha rugta Boliiska, waxayna si …